1 Mose 49 AKCB – ዘፍጥረት 49 NASV | Biblica
1 Mose 49 AKCB – ዘፍጥረት 49 NASV
Yakob Hyira Ne Mmabarima
1Yakob frɛɛ ne mmabarima nyinaa ka kyerɛɛ wɔn se, “Mummetwa me ho nhyia, na menka mo nea ɛbɛba mo so daakye.
2“Yakob mmabarima, mommoaboa mo ho ano, na muntie;
muntie mo agya Israel.
Wo na woyɛ me tumi ne mʼahoɔden nsɛnkyerɛnne a edi kan a
ɛboro anuonyam ne tumi so.
4Woyɛ kitikiti sɛ asorɔkye, nanso worenkɔ so bio,
efisɛ woforoo wʼagya mpa ne ne yere kɔdae,
Wogyina hɔ ma basabasayɛ ne asisi.
6Mma me nkɔka wɔn agyinatu ho,
efisɛ wɔnam wɔn abufuw so akunkum nnipa,
na wokunkum anantwi de gyee wɔn ani.
7Nnome nka wɔn abufuw, efisɛ ano yɛ den,
na ɛyɛ atirimɔdensɛm!
Ɛno nti, mɛbɔ wɔn asefo ahwete
8“Yuda, wo nuabarimanom beyi wo ayɛ.
Wobɛsɛe wʼatamfo nyinaa.
Wʼagya mmabarima bɛkotow wo.
9Yuda, woyɛ gyata ba a
woawe wʼatamfo nam awie.
Wote sɛ gyata a wabutuw.
Hena na obetumi akɔka no?
10Ahempema remfi Yuda nsam,
na saa ara nso na ahempema remfi nʼanan ntam,
kosi sɛ, nea ɛyɛ ne dea a aman nyinaa betie no no bɛba.
11Ɔbɛsa nʼafurum wɔ bobe dua mu.
Ɔde nʼafurum ba bɛsa bobe pa mman mu.
Ɔbɛhoro ne ntama wɔ nsa mu,
na wahoro nʼatade nso wɔ bobesa kɔɔ mu.
12Nʼaniwa aba bebiri asen bobesa.
Ne se bɛyɛ fitaa asen nufusu.
Obesisi ahyɛngyinabea ama ahyɛn.
Nʼahye so bɛtrɛw akosi Sidon.
14“Isakar yɛ afurum hoɔdenfo a
obutuw hɔ rehome wɔ nguankuw mu.
15Sɛ ohu sɛnea nʼahomegyebea ye fa,
ne sɛnea nʼasase no so dwo a,
obekuntun agye adesoa,
16“Dan bebu ne manfo atɛn
sɛ Israel mmusuakuw no baako.
17Dan bɛyɛ sɛ ɔwɔ a ɔda kwankyɛn;
ɔbɛyɛ sɛ ahurutoa a ɔnam ɔtempɔn mu a
sɛnea ɛbɛma ne sotefo atew ahwe nʼakyi.
18“Awurade, wo nkwagye na meretwɛn.
19“Nnipa bɔnefo bɛtow ahyɛ Gad so,
na ɔno nso betiw wɔn atow ahyɛ wɔn so.
20“Aser aduan a odi no bɛyɛ aduan pa.
Na ɔbɛma ahennuan a ɛyɛ akɔnnɔ.
21“Naftali te sɛ ɔforote a wɔagyaa no a
ɔwo mma ahoɔfɛfo.
22“Yosef yɛ ngodua a ɛsow aba,
a esi asuten ho,
na ne mman tra afasu.
23Agyantowfo kaa no hyɛe,
de abufuw tow hyɛɛ ne so.
24Nanso ne bɛma no gyinaa pintinn,
esiane Otumfo Nyankopɔn a Yakob som no no
a ɔyɛ oguanhwɛfo ne Israel botantim no;
25esiane Onyankopɔn a wʼagya som no a ɔboa wo no;
Otumfo a ɔde ɔsoro nhyira behyira wo;
nhyira a efi asase ase pɛɛ;
nhyira a efi nufu ne ɔyafunu mu no.
bɛdɔɔso asen tete nteredee mmepɔw
ne nkoko a etintim hɔ daa no so nnɔbae.
Eyinom nyinaa mmra Yosef ti so,
engugu anuanom no mu nea wɔapaw no no anintɔn so.
ɔbɔ aporɔw anɔpa, kyere ne hanam we,
na edu anwummere a, ɔkyekyɛ nam nkae no.”
28Eyi ne nhyira a Israel mmusuakuw dumien no agya de hyiraa wɔn; obiara ne sɛnea ɛfata no.
Yakob Wu Ne Ne Sie
29Yakob rebewu no, ɔka kyerɛɛ wɔn hyɛɛ wɔn se, “Aka kakraa bi, na wɔrebɛfa me akɔka me mpanyimfo ho. Sɛ miwu a, munsie me wɔ ɔboda a ɛwɔ Hetini Efron afuw a wosiee me mpanyimfo wɔ mu no mu. 30Ɛno ne ɔboda ne afuw a ɛwɔ Makpela, a ɛbɛn Mamrɛ a ɛwɔ Kanaan asase so no. Abraham tɔɔ saa ɔboda no fii Hetini Efron nkyɛn, de yɛɛ amusiei. 31Saa ɔboda no mu na wosiee Abraham ne ne yere Sara. Ɛhɔ ara nso na wosiee Isak ne ne yere Rebeka, na misiee Lea nso. 32Me nena Abraham tɔɔ afuw no ne ɔboda a ɛka ho no nyinaa fii Hetifo no nkyɛn.”
33Bere a Yakob kasa kyerɛɛ ne mma no wiee no, ɔmaa ne nan so guu ne mpa so wui. Wokosiee no wɔ ne mpanyimfo nkyɛn.
AKCB : 1 Mose 49